David Wilkerson ngentshukumo ukholo | Apg29
"Umfundisi wathi, uye kude, ngenye imini, womshumayeli weendaba eme uthi, ndiye ndafumana isityhilelo esivela kuYehova, eli lixesha lokuba uqale banqula uMariya. Iya kuhamba kwindawo apho."
"Le yenye yezona ukuthotywa mkhulu kaYesu Kristu wayekwenza ukususela uKristu Le ezilungileyo ndakugwenxa nto ityhefu izixa -.. Nkqu eTshayina, eAfrika nakwihlabathi jikelele Kuyinto i ivangeli yaseMelika omashini kwaye isasazeka ngokuthi abavangeli izityebi zaseMelika kunye nabefundisi Rich.! "
Sithatha kwakhona ukuze uqonde ubukhali ukuba awusele wenze oko. Ndiyambulela uThixo undisindise ingcinga ezingeyonyaniso isihlokomiso yaye ndiya kumvuma njengokuba isono akuba ebuyile, ebamkele mfundiso zobuxoki.
Wena lila elikhangeleka eSweden namhlanje phakathi kwabantu bakaThixo? Uphi na intetho malunga ayobe uMtshakazi? Ngamanye amaxesha kubonakala ukuba uninzi amaKristu ugxile kakhulu kwi Kristu ukuvelela ukuba uYesu uza kubuya!
Ingaba ukulungele ukuba uYesu ukuba eze? Intetho of the Cross, xa weva ezintsha, 1886?
Ngoku ufumana ukufunda omncinane malunga David Wilkerson oko wabhala ukuhamba ngokholo.
I uhlazekile Assembly
Yentsusa IsiNgesi Isihloko -The ungcikivo yeNdibano ozothileyo
ngu David Wilkerson
UZefaniya 3: 18- Abo buhlungu ngenxa emisiweyo ndisaya kubutha, ngabo abo abangoonyana baka kuwe, lowo umthwalo nehlazo. (1917)
Esi siprofeto ezimbini kaZefaniya. Kufuneka wenze nabantwana bakaSirayeli kodwa neZiyon ngokomoya (yona ilibandla kaYesu Kristu ngemihla yokugqibela). Kuqala kwinto zonke, uthetha kumaYuda - ukuba uThixo wayeza kuzisa ndawonye saa - kodwa uza kukubuyisela kuphela abo intliziyo eyaphukileyo ukuba imeko elusizi kaSirayeli - wayeya khumbula bonke ababethwele ukuthotywa - zonke izinto ezimbi waya kuThixo ndlu. To labo babathabatha umthwalo, wathi; "Ndiya kwenjenjalo ukunibutha." Wabanika zithembiso ezinkulu
Esi siprofeto ubhekiswe ibandla lika Yesu Kristu ngemihla yokugqibela. KwiTestamente eNdala, oonyana bakaSirayeli nabizelwa umthendeleko iintsuku ezisixhenxe. Ngosuku lwesibhozo - Indimemele umthendeleko. Kungelo xesha ke bahlangana kunye - ubeke enye ecaleni yonke kwaye zijolise khonza ekudumiseni uYise wabo wasezulwini. Isibhalo sithi: "Ngosuku lwesibhozo yoba yingqungquthela kuni." Le ngqokelela isidlo limele yiTestamente Endala, wakwahlula ibandla kufuneka kuyikhawulela iNkosi.
Oku ibandla lika Yesu Kristu ngemihla yokugqibela. Ngokutsho kaZefaniya, ukuze kuthotywa indlu kaThixo ngemihla yokugqibela. Igama lesiHebhere apha lithetha "ihlazo kunye lihlazo". Kuya kuba ukudana nehlazo indlu kaThixo. Thina sithetha ngalo abaziinjubaqa, ibandla melo mihla - uNdikhoyo uthi ukuba iMini Yomgwebo, uya kujongana ibandla. Singathandaza kubo, kodwa ke kufuneka singawamoshi iinyembezi zethu kulo ukuba akukho iNdibano wokwenene.
UThixo ufuna ukuba abantu abafuna ukuba kukhedama nilile ngenxa ukuthotywa ukuvela iBandla likaYesu Kristu kule mihla. Ndithetha malunga nebandla wazalwa ngePentekoste. Ndithetha malunga nebandla wazalwa uPawulos mfundiso zabapostile. Ibandla ukuba wazalwa inyaniso ngoYesu Kristu ukuba alawule. Ibandla ozelwe ngokutsha uhlaselwa. Assembly usibekekile.
Kuye waprofeta ukuba kweli xesha kuhlaziswa, ihlazo kunye ngamanyala lawo, uThixo uya kunivelisela amasalela engcwele oya kukhedama nilile lo ungcoliseko - UThixo uya kuba kuyo abasindileyo Andihlali izandla ngexesha konke oku bahlasela yeNdibano. UThixo uthi: "Ndiya kuba abantu baya kuba baphila ubomi elungileyo ongazihoyanga banolwazi lokunyanga kodwa bengenalo kunye nemali abaprofeti ababuxoki, niyageza kungena endlwini kaThixo aze atshabalalise yonke into."
UThixo uya babutha abantu buhlungu kule - ukuba ngenene umthande uYehova nothando ibandla lakhe, awukwazi ujonge kwenzeka ntoni namhlanje (yaye ndiza kukhankanya ezi ukuthotywa ngamagama). Ukuba emva kokuva into endiyibhekisa kuwe ngezi ukuthotywa, unako ukuhamba ekhaya ecaweni uthi: "Mna namathelani koko kubhaliweyo kuMateyu 18, namasango elabafileyo akayi kuma kwiNdibano, andiyi Ungakhathazeki ngam, uThixo has zonke phantsi kolawulo.
Akwanelanga. UThixo usebenzisa abantu. UThixo usebenzisa abantu ukuze enze umsebenzi wakhe. Yena akayi iingelosi ukuthumela. Iingelosi walila phezu kwayo; kodwa uThixo akasebenzisi iingelosi ukuphumeza injongo yayo. Usebenzisa amadoda nabafazi ngeentliziyo eyaphukileyo imithwalo -. Isigwebo esisemnyango, uYesu. Usuku kweNkosi kusondele.
Vuka abadala. Vuka abefundisi. Vuka abelusi.
Jonga kwi ibandla. Fumana nespelete. Wear ngayo. Kutheni kuthatha umthwalo yeNdibano ozothileyo nehlazo thina? UYoweli wathi, "ngenxa yokuba imbewu ombi kutyaliwe.
A iindaba ukuba ufumana yonke into emehlweni ukuze kubuna. Yonke into eluhlaza kaThixo acwengileyo yabuna. Imbewu Abantu ruttet- indlala ukuva ilizwi olusulungekileyo likaThixo kodwa akukho amadlelo. Lenkomo ishiyelwa, belambile. Imilambo zome. A umlilo ongesesikweni liqwenga nabefundisi. UHezekile uthi belusi yayilahla phantsi amasimi elungileyo nidle zikufaneleyo wena. Yintoni na le nto kulihlazo eyenzekayo iBandla likaYesu Krestu namhlanje?
Lo ngomnye weyona ukuthotywa mkhulu kaYesu Kristu wayekwenza ukususela uKristu. Le ivangeli ndakugwenxa into etheni izixa - nkqu China, eAfrika nakwihlabathi jikelele. Lo ezilungileyo yaseMelika yasungulwa kwaye isasazeka ngokuthi abavangeli izityebi yaseMelika kunye nabefundisi. Esisityebi!
Oku kundenza becaphuka ukuba kunjalo abantu abaninzi kuva bands ubone iividiyo uphume kwezi nkomfa ukuchuma ngaphandle bekhala phezu kwazo. Le ityhefu isasazeke ehlabathini lonke. Cuba aza kuvula, yaye bafuna ukungena ngexesha elinye ngempumelelo kwabo iindaba ezilungileyo uze uthi kubo, 'oye waba lihlwempu elide ngokwaneleyo, uThixo ufuna bonke ukwelinye kufuneka ube sisityebi. "
Le veki ndafumana tape ividiyo zarekhodishwa kwiintlanganiso Kenneth Copeland kaThixo. Ndaphulaphula isithethi waza Indothusile. Abahlobo sifunda iTestamente Entsha, uya kufumanisa ukuba umpostile uPawulos wachaza abo ke bakholwayo baba ngabapostile bobuxoki. Wabayala ke wathi ngamagama abo. Ndithi kuwe ukuthi, Ukuba uthe waliphulaphula oko ndithi kuni, kodwa ukuba ammbambazelele, ngoko bangaboniyo. Wena baziimfama ngokomoya. Wena ke iintliziyo nzima. Intliziyo kunye isikrweqe nzima emhlabeni ukuze ivangeli qwa ugxile. Wena uye elizele kangangokuba nale ezilungileyo engalungelelananga ukuba akukho engqondweni yakho. Awukwazi ukushumayela inyaniso. Awukwazi ukubonisa nto ngokubhala ngenxa yokuba i isikrweqe phezu iintliziyo zabo. iintliziyo Nzima.
Abanye uya kufumana loo nto. Ukuba sele uyifakile umphefumlo wakho Copeland okanye iiteyiphu Hagin kaThixo, aniyi kuzenza izinto othanda into eniyivayo. Zihlobo, Ndim umalusi, ndiye ndabizwa nguThixo. Mna bachaza eli bandla isithembiso. Logama nje sime kulo rostrum, sabona iingcuka ngezambatho zeegusha abafikayo utshontsha umhlambi, kufuneka ume ukhwaze. Kuxhomekeke kuwe ukuba wenze into ngayo. Bendihleli kule veki kwaye waphulaphula njengesithethi kwinkomfa yaye ndikholelwe buhlungu. Ekubandezelekeni A enkosini yeza phezu kwam. Yiloo nto ukushumayela lo myalezo. Benza isijwili ngalo abantu.
I caphula igama negama into eyayithethwa. Izithethi wayengakwazi ukuthetha ogqityiweyo ngenxa bonke abantu beza uyibeke imali ezipokothweni zabo. Isizathu sokuba babe benza loo nto imfundiso entsha ethe kuphuma bathi, "ukuba ufuna angabongwa, ngoko ke kufuneka ufumane umvangeli kusikelelwa okanye umfundisi uyakwazi ukufumana ngenxa yokuba kakhulu ukufumana elininzi walowo kancinane, kwanoko anako kuya kuthatyathwa kuye. Ukuba ufumana impumelelo umshumayeli kakhulu esikelelekileyo ukumnika imali, kwaye uya kusikelelwa. I kunoyolo yena, ukuba unike abo kusikelelwa - "ukuba ngathi scheme iphiramidi. Ukuba la madoda apha ehlabathini, baya angazibona selesentolongweni. ezilandelanayo. Lowo na phezulu kwaye babonakala kangcwele, owathethayo zingxola. Amakhulu abantu beza de iipokotho zakhe eyimitha. Aboni uthi, "le vangeli simahla? Yamaphepha? "
Mamela oko kwakuthethwa. Isithethi waphakama, wathi, malunga mhlolokazi ulihlwempu afumana uncedo loluntu ikunika iidola 5, ngoko umele ukwenze oko, uEliya wathabatha ukutya wokugqibela womhlolokazi. Nina athanjisiweyo, nina nifanelwe uyalithabatha, lithabathe. "Wathi Isithethi enye," Ndihlala ngesikwere endlwini 1000 ngeenyawo. Ndiya kulakhela yakhula ngoku. Enye uKumkani uSolomon uya kuba neqhayiya ngayo. Ndihlawule nje 15,000 US ukuba inja. Ngaba ubona ebengumsesane zobungangamela esandleni sam, mna kutshanje aseJamaica wahlawula 32.000 US dollar kuyo. Ndifuna ukwazi ukuba xa abantu apho ndihlala ezidlulileyo nandawo yam isebenza ubone yam Rolls-Royce kwi engena, ukuze azi ukuba kukho uThixo emazulwini. "
Ndixelele, ivangeli? Ndixelele, musani ukundililela phezu kwayo?
Esinye sezithethi wema waza wathi: "Senze umnqophiso uMzalwan Copeland ukuba kulo nyaka ozayo, akukho namnye kuthi ubunzima usuku olulodwa. Asimele andiziva mzuzu lokudimazeka. Asiyi kufumana ugula okanye udinga into. Kufuneka kunandipha zonke iintsikelelo. Sikhaba konke ukubandezeleka, zonke iintlungu, zonke iingxaki zemali. " sivakala silungile ukuba ngaba ngaphezulu.
Oku into kukrakra kunene kum kakhulu. Oku zashunyayelwa. "UMoya oyiNgcwele akanako kuphalazelwa phezu kwakho ude ube kumsinga imali. Ngaphambi kokuba ophumelelayo uMoya oyiNgcwele, ayenzi nantoni na. "
Cinga ngaloo nto! iyayichaphazela njani oku wena? Yintoni eyenza kube ngomoya wakho xa ubona abantu abahluphekayo abahlala ukusuka isandla emlonyeni, waza ngesiquphe athi, "bafune imali" kunye nabantu zibaleka ngathi crazy kwaye xa ukubaleka, bathi thina "sithi ubutyebi."
Emva koko ndibona abantu ukugaqa njengeenyoka ngaphandle izitulo zabo kwaye gwantyi phantsi. Ndikhangela umvangeli eme, benze umsondlo njengenyoka kunye nabantu eziwayo yonke. Zihlobo, oko kwenzekayo?
Ukuwa högtidsförsamligen! Umprofeti wabiza kubo "izinja obawayo, abalindi abangenabuthixo". Zihlobo, ukuba uthe waba intliziyo kaThixo nokuxinezeleka leNkosi ngaba ubuya kukhala noIsaya, ukuba balindi abangaboniyo, ningazi, izinja izidenge, ulele, ukulala onothando, izinja ababawayo leyo akasoze ngokwaneleyo.
"Ndino 1,000 square metres kodwa ndiya wathengisa ngayo, yaye ndiza kulakhela indlu uKumkani uSolomon akwazi ukuphila zazi" Ukuze kuze ngokwaneleyo. Wathi, "abalusi ukuba lungenakuqondeka, wonke umntu ukhangela kuye, nantoni na ukuze iimfuno zabo adibana. UYeremiya wamsindisa akukho mazwi. Wathi: "Abantu bam iigusha ezilahlekileyo. abalusi babo babandwendwisela ezilahlekileyo "Uthi:" Umfundisi, unalo ilungelo lokuthetha ngamandla ngalo mbandela "Ukuba ucinga mna elibukhali, koko funda UHezekile 34:.. 1-10.
Wena uthathe nezigidi ezingama-50 ukusuka kuloo mhlolokazi kwaye uthenga inja ngenxa oka- 150 000. Wena uthathe umhlala-phantsi ukususela umhlolokazi kunye amahlwempu, yaye ubaxelela ukuba azinayo ukholo ngokwaneleyo - ngokuba asiphumelelanga. Wena uthathe uboya izimvu. Wena ke andifuni imiphefumlo, sifuna imali. "Le abalusi fatten ngokwabo kwaye hayi umhlambi, ngoko ke, balusindini, liveni ilizwi likaYehova. Itsho iNkosi uYehova uThixo wenu, bona ndibachasile abalusi, yaye kuya kubuyekeza mna umhlambi esandleni sabo, yaye baya kuyeka ukuba kwalusa umhlambi. Okanye ukuba fatten bona kakhulu; ngokuba ndiya kubahlangula umhlambi emlonyeni wabo, yaye abasayi kuphinda kuba enyameni yabo. "
Ndiwaphelise ugxuba ezi amazinyo madoda. UThixo asincede.
Okwesibini, ukutyhefa loMoya esikelelekileyo oyiNgcwele. Le nehlazo imbi. Bekuya kusenze kuwa ebusweni bethu. Indlela athe uMoya oyiNgcwele uya igqwethekile ehlabathini lonke.
Kubuhlungu ukuqaphela ukuba kukho ukuqonda kangako ukuze eseleyo ebandleni naphakathi abefundisi ezininzi kunye neenkokeli zecawa. Bona Andazi nokuba xa uMoya oyiNgcwele egqwethekileyo okanye umnyelisileyo. Kukho amawaka amaKristu abaya ukuba amaphulo imvuselelo uze ubone izinto abakholelwa iphuma uMoya oyiNgcwele, kodwa abayazi into bayalufumana. Ukuba baqhwabe izandla zabo, yadumisa uThixo umntu xa emi phezu eqongeni unyelise kwaye ukugqwetha uMoya oyiNgcwele, kwaye abazi nto.
amahlelo Lonke anomoya, kuquka intshukumo American bakwaMoya, sichitha revivals zobuxoki. Zonke iintlobo izinto zenzeke - into entsha phantse ngazo zonke iiveki. Iinkokeli abazi nokuba lako okanye Mababuqalekise. Abayazi into ntoni. Sifumana iileta ezivela amakhulu yabefundisi ehlabathini lonke. Babuza. "Ilungelo Yintoni na nokuba yintoni na engalunganga?" Baphi iinkokheli? Uphi na umntu oza kusikhokela?.
Zihlobo, into esingayiboniyo eyenzekayo namhlanje koko kuthiwa revivals yaye yintoni eyenzekayo ngoMoya oyiNgcwele, asinako ukufumana isiseko leempendulo elo. Nantoni na ukuba asikwazi ukufumana esibhalweni kufuneka yaliwe. Ngokupheleleyo yanto!
Ndikhale xa ndibona aba iividiyo ukuba abantu ukuthumela kum evela kwilizwe liphela. amabandla buphela kolawulo, esiwa phantsi, ehleka hysterically, Usigxadazelise ngeenxa ezifana amanxila, izibhija njengeenyoka, bebhomboloza njengezilo zasendle. Sibe ngabashumayeli beendaba ezilungileyo omiyo phezulu kwaye uvuthuza abantu ukuze nabo ukuba bawe, ngokungathi uMoya oyiNgcwele eziqulathwe kuye. Likhanyisa ibhatyi yayo uphawu abantu yaye uthi "esandleni sikaYehova."
A ivangeli omtsha nje ukuza eMelika. Zihlobo, ukuba baberhabaxa kwaye ekrwada, kodwa mna ndithi kuni. Xa ushiya iLizwi i parameter, xa uthi: "Le yinto entsha, uThixo wenza into entsha? Andiluqondi oko, le nto ngokubhala, kodwa mna andifuni ukuxhathisa uMoya oyiNgcwele. "
Zihlobo, ukuba ayikho eBhayibhileni, kufuneka sixhathise ngayo. Le yeyona ukuba akanakungena ebukumkanini bukaThixo ukuba awuyithandi umntwana omncinane. Abantu banxiba amanabukeni ukwenzela ukuba babe nako ukwenza iimfuno zabo ngexesha kwiintlanganiso. Yeyona zakutshanje. Zihlobo, oku kuya kuphela phi?
Omnye umfundisi wathi: "Kuye owada, ngenye imini, womshumayeli weendaba eme uthi, ndiye ndafumana isityhilelo esivela kuYehova, eli lixesha lokuba uqale banqula uMariya." Iya kuhamba kwindawo apho.
Omnye umvangeli uzibiza oyiNgcwele uMoya bartender. Uthi, "Yizani bar kwaye usele uMoya oyiNgcwele." Bayibiza ngokuba Nisele iwayini entsha. I ukuva amazwi lo mprofeti unkenteza ezindlebeni zam, "imini yeNkosi apha, kulawula ububi, nilile phakathi inkundla kunye isibingelelo. Nxiba wengxowa iimpahla. Iyalungiswa lusizi ngenxa yabantu iwile. "
UYesu uza kuza. Ezi izihlwele nangoku zi-. Xa ndibona amaKristu ukuya into esiyibiza bar uMoya oyiNgcwele, ukugxadazela njengomntu onxilileyo, uya amazwi sikaYoweli kum ngokucacileyo, "Vuka, wena ninxile, balila, nonke nina basela iwayini entsha kuba intsimi lokuvuna iyatshabalala."
Imiphefumlo amawaka kufa, ngoko yintoni na hleka? Ukuba uMoya oyiNgcwele uya kufuneka ukuba basebenze kuyo yonke indawo ehlabathini. Kufuneka abenakho ukuthabatha kuyo kwiindawo ezininzi obuqatha kunye ndiphantsi. Kufuneka abenakho ukuthabatha kuyo kumazwe amahlwempu. Kufuneka uthathe kwi ngeentsipho abantu, yaye oko kufuneka basebenze apho. Alinako ukusebenza kuphela izityebi eMelika. Limelwe ukusebenza kuyo yonke indawo ehlabathini.
Ndicela umngeni aba bantu ukuba ivangeli zabo ehleka kungena Balkans ngoku. Yiya kwiinkampu zeembacu apho abafazi bekhala ngenxa yokuba abantu babo adubule. neentombi zabo badlwengulwa. abantwana babo balambile. Baye baphulukana namakhaya abo, ukuze ubacele ukuba baye bar - UMoya oyiNgcwele ufuna bahleke. Oku kubizwa ngokuba yi-imvuselelo ukuza Madison Square Garden kweli hlobo. Ukuba unako script, wena zithwele umthwalo nendibano engcwele, ubuya kuba ukulungele ukuthatha yimfundiso ngayo.
Makhe ndinixelele ngubani ukuhleka. World. Iintlanga abangahloneli Thixo. Kuye waba intlekisa. Ngexesha kufutshane kokufika kukaYesu xa ibandla lika Yesu Kristu kufuneka abanjwe xa yokugcina efihlakeleyo xikhongelo. belila Xa ngenxa abalahlekileyo. Xa kwakuza kufuneka umnqweno ukusilahla yonke kwaye silandele uYesu. Xa ngonaphakade dollar kufuneka zikhankanyiwe. Uthixo yaseMelika. Le avgudadyrkandet yaseMelika. World ubukele le impambano kwaye uyazi ukuba yintoni bacinga - ukuba uMoya oyiNgcwele ringmaster. It is a isekisi akuyo.
Andikhathali ukuba abantu bacinga kwakhona. Andikhathali nokuba abantu abafuni yeendaba kwakhona. Ndinyamekele imiphefumlo yabo kunye nento yokuba bebaninzi kangaka tameke. I sinembopheleleko phambi koThixo ukuze nime phambi kwebandla ukuba oko kuthiwa kum, ukuba bakhonze, ndakuqononondisa kwaye uthi ukuba ezi lungcikivo ibandla amisiweyo, kwaye iBhayibhile ithi niya kukhedama phezu kwayo. Abadala iza kubonelela. Icawe, umfundisi, abakhonzi, zeVangeli. Sifanele sithandaze phantsi le iinqaba.
Ekugqibeleni, ungcikivo ayithobe yeNdibano demoralization. Yeha ke abo bathi okulungileyo kubi nokubi kulungile - ebiza ubumnyama endaweni yokukhanya nokukhanya endaweni yobumnyama. Loo nto yenza kube krakra amnandi amnandi nakrakra. (Yer 23:15). Ndibone izinto ezoyikekayo kwi abaprofeti. Ukukrexeza, bahambe ubuxoki, ubungqina bokuba ngezandla zabachasene akukho lokubuya ububi.
Ndafumana ileta kule veki evela umfazi ongumKristu ngumsindo. Wathi, "Umyeni wam, ngubani uzibiza ngumKristu, lichule enkulu, udlala kuba ngezigidi." Wathi, "Ndakhe wayekhathazeke kakhulu malunga neengozi kunye nenkampani into anayo." Ndacinga, "ndicela ukuba aye umfundisi."
Wathi, "Mzalwana Wilkerson, awuyazi into eyenzekileyo, mna ngumsindo, buhlungu yaye bedidekile. Ndathumela multi-million longcakazo umyeni yethu umfundisi wethu. "
Wathi, "Ndiya ndiyifunile isibhalo 1 kwiGenesis ukuya kwiSityhilelo, yaye nam andikwazi ukufumana nantoni na eZibhalweni ababezithethile ukungcakaza. Ndibona akukho sono kuyo, kunjalo konwaba. "Yena nqa yiloo nto," njani na umfo wakwaThixo, ukuba bathi into enjalo umyeni wam? "
Le nto kanye Wathi uYeremiya, "abefundisi ezingqina bobubi izandla yaye akukho mntu ebuya kubungendawo bakhe." Uchaza isizathu ukuba onokujongela Assembly demoralization yaye kutheni okubi kulungile, okulungileyo kubi, kukrakra amnandi amnandi nakrakra.
Wathi, "Abaprofeti bakrexezile, nokuhamba ebuxokini." Nabani na isono ebomini bakhe aziyi kuma uze uthethe malunga nesono enkampini. Uyohlwaywa ngabo ukukrexeza yakhe, isono sakhe kunye ingqondo yakhe embi.
Andiqondi ayinakufikelela abakhonzi kweli lizwe ngenxa ikama. Uninzi yabakhonzi umlilo uThixo. Kukho abakhonzi abatsha nyulu kweli phakade embi. Ndiye ndadibana abaninzi babo yaye ndiyambulela uThixo ngenxa yawo. Nakuba kulo mzi, ndiye ndadibana ezinye bashumayeli amalungisa ndiye ndadibana ebomini bam.
Amanqaku zabakhonzi kunye nam ndizive intlungu yaye bafuna @UnathiKondile amazwi ukuba kutyhila into embi. "Ukuba bebemi ezinkundleni bam baza abantu bam ukuva amazwi am - ke ukuba uwuthethe oko kusentliziyweni yam. bona Ukuba awathethileyo ukususela ingqondo kaThixo, bababuyisa abantu ezindleleni zabo ezimbi nezenzo zabo ezimbi. "
Unokubona ukuba umntu uyazi iNkosi uThixo ithi ngalo enye, "Mna andibathumanga, mna andithethanga kubo, bathetha ngokuphuma ngqondweni yabo. Out of ububi ezintliziyweni zabo.
"Bathetha imibono entliziyweni yabo, mna andibathumanga. mna andithethanga kubo. Bathi kwabo kwabandigibayo, Yathi iNkosi, Niya kuba noxolo, 'baze bathi bonke abahambayo emva entliziyweni yakhe kunye neminqweno yakhe' Akukho ububi uya kuza phezu kwakho. ' " Le yokungcikivwa yingqungquthela bekuya kuba buhlungu kakhulu kubo bonke abo bamthandayo uKristu iBandla laKhe. Oku kuya kuba buhlungu kakhulu ezintliziyweni zabo - ungcikivo igama lakhe kunye nebandla layo. Ukukhala phezu Assembly kukarhulumente. Xa uthatha isigqibo, yaye xa uthatha umthwalo kaNdikhoyo kuwe, ngako ukuthandaza nokuzila ukudla. Wonke umntwana kaThixo kufuneka sithandaze ukuba bonke abo babanjiweyo kulo ukuba bakhululwe. Musa akazukuyibamba, musa ukuya kufuphi kuyo, ukuba uye apho kuphuma ukwazi, oko uya kubanjiswa yiyo ngenxa kunomtsalane yonke inyama.
Ude siyazi indlela yokusebenza inyama yakho ngoMoya oyiNgcwele, ngoko ukuhlala kude kuyo. Wathi uYeremiya, "INkosi uThixo wakho phakathi kwakho inamandla. Uya kusisindisa yena, uya kuba nemihlali ngawe bememelela. Uya kuphumla eluthandweni lwakhe. Yena uya kuba nemihlali ngawe nokucula. "
Kutheni? Ngenxa yokuba uye wafumana abantu buhlungu ngento kukrakra intliziyo yakhe. Sithwalisana imithwalo yena uthwala, ungcikivo kwilokishi esesikweni.
Oku kuya kuba "uthando umgibe". Uya kuva. "Thina siyamthanda wonke umntu. Akukhathaliseki into ukushumayela. Akukhathaliseki ukuba iyaphumelela. Akukhathaliseki ukuba ivangeli wakho - okanye nantoni na eyenye. Makhe aphane bethu. "Njani ababini ukuhamba kunye ngaphandle kokuvumelana. Njani na ukuhamba nalo u nga pfumelelani na, nto leyo imikhwa likhohlakele, wena awukwazi. It is a uthando umgibe. Bathi, "musani ukugweba nabani na."
Oko asikuko oko kuthethwa yiBhayibhile. Ithi ukuba siya kugweba ngogwebo olulungileyo. Sisingcikivo abakhalimele ngomonde. Andiqondi kuma isitya isepha, ndimi phezu kolwalwa. UThixo uzama ukuba ndinisindise, Ward.
Yintoni na ubutyebi kaThixo kuYesu Krestu? uxolo lukaThixo, ubulumko bukaThixo, uKristu yakhe, yonke into uKristu ngawethu.
Zihlobo, lumka! Qaphela!
Ngaba uyoyika? Ingaba ukulungele ukuthatha umthwalo kaYehova. Awunakuyenza loo nto enyameni yakho. Vula wena kunye noThixo.
lifikile ixesha lokuba memani ingqungquthela. Ukuba unayo nayiphi na kwezi makhasethi okanye iincwadi, aziphose endlwini yakho. Musa ukubanika bemke, uzitshise. Ukuba umntu uyakumema ukuba ujoyine ezi ntlanganiso, ngoko athi, "Ndicela uxolo, andifuni ukuba ungatyi ilizwi kwaye andifuni intliziyo yam ukuba yome kwaye kubuna. Ndifuna igama ndimsulwa eNkosini wandivumela ukuba ikhule. Andifuni nawuphi na umyalezo ebangel inyama yam, okanye ukudala ukubawa entliziyweni yam. "
UThixo ubonelela ngoko kufuneka sikwazi yaye wenza imimangaliso, kodwa ke loo nto ngendlela yakhe. Hayi kabi kwaye kakubi iSibhalo.
UAbraham andifuni ngenxa komhlaba, wayewulindele umzi ukuba yakhiwe kwaye wadalwa nguThixo.
Le imeyili umfundi. uluvo lombhali ngokwabo kwaye hayi ukuba yintoni Apg29 limele.